Health | J-Myanmar
အသက် ၁⁠၁​၅ နှစ်​ရှိ​နေ​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့ Emma Morano ဟာ ကမ္ဘာ့ ပဥ္စ​မ​မြောက် အသက်​အကြီး​ဆုံး အမျိုးသမီး တစ်​ယောက် ဖြစ်​ပြီး ဥ​ရော​ပ​မှာ​တော့ အသက်​အကြီး​ဆုံး ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အီ​တ​လီ​နိုင်ငံ ၊ ဗာ​ဘေး​နီး​ယား​မြို့​မှာ​နေထိုင်​တဲ့ Emma Morano ဟာ သူမ အခု​လို အသက်​ရှည် နုပျို​နေ​ရ​တဲ့ လျှို့​ဝှက်​ချက်​ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆို လိုက်​ပါ​တယ်။ သူမ​ရဲ့ လျှို့​ဝှက်​ချက်​ကတော့ တစ်​နေ့​ကို ကြက်ဥ အစိမ်း​တွေ စား​သုံး​ပြီး အမျိုးသား​တွေ​ကို ရှောင်​ကြဉ်​တယ်​လို့ ဆို​ပါ​တယ်။ သူမ​ဟာ ၁​၉​၃​၈ ခု​နှစ်​မှာ သူမ​ရဲ့ ခင်ပွန်း​နဲ့ ကွာရှင်း​ခဲ့​ပြီး​တဲ့​နောက်​မှာ အမျိုးသား​တွေ​နဲ့ ပတ်သက်​ခဲ့​ခြင်း မ​ရှိ​တော့​ဘူး​လို့ သိ​ရ​ပါ​တယ်။ သူမ​ဟာ ဆယ်ကျော်​သက် …
နံနက် ၅ နာရီ​မှ ၇ နာရီ​တွင် အူမကြီး အလုပ်​လုပ်​ချိန် ဖြစ်​သော​ကြောင့် ထို​အချိန်​အတွင်း အိပ်ရာ​ထ​ကာ ရေ​တစ်​ခွက် အဝ​သောက်​ပြီး ဝမ်းမှန်​မှန် သွား​သင့်​သည်။ ထိုသို့​မဟုတ်​ပါ​က အူမကြီး​ညှစ်​အား နည်း​နေ​၍ ဖြစ်​ပြီး အမျှင်​ရှိ​သော အစားအစာ များ⁠များ​စား​ပေး​ပါ။ နံနက် ၇ နာရီ​မှ ၉ နာရီ​အတွင်း အစာအိမ်​မှ အလုပ်​လုပ်​ချိန် ဖြစ်​သော​ကြောင့် ထို​အချိန်​တွင် နံနက်ခင်း​စာ (Breakfast) အဝ စား​သင့်​သည်။ နံနက် ၁​၁ နာရီ​မှ ၁ နာရီ​အတွင်း နှလုံး (Heart) အလုပ်​လုပ်​ချိန် ဖြစ်​သော​ကြောင့် ထမင်းစား​ပြီး ခဏ​တ​ဖြုတ် အနား​ယူ​သင့်​သည်။ ညနေ ၁ နာရီ​မှ ၃ …
phyo, Jan 7, 2015
အီး-စီး​က​ရက်​မှ ထွက်ပေါ်​လာ သည့် (မ​မြင်​ရ​သော)ရေ​ငွေ့​တွင် Formaldehyde (အပုပ်​နိုင်​သော ပစ္စည်း)နှင့် acetaldehyde အပါ အဝင် ဓာတု​ပစ္စည်း​များ​ပါဝင်​နေ​မှု အဆင့်​မြင့်⁠မြင့်​ရှိ​နေ​သည်​ကို ဂျပန် နိုင်ငံ​ရှိ ကျန်းမာ​ရေး​ကျွမ်းကျင်​သူ များ​က တွေ့​ရှိ​သည်​ဟု သိ​ရ​သည်။ ဤ​တွေ့​ရှိ​ချက်​သည် အီး-စီး က​ရက်​အပေါ်​အား​ထား​နေ​သူ​များ ကို ထိုး​နှက်​လိုက်​ရာ​ရောက်​သွား​လေ သည်။ အီး-စီး​က​ရက်​သည်​သာမန် စီး​က​ရက်​များ​ထက် ပို​၍ အန္တရာယ် ကင်း​သည်​ဟု ထုတ်​ပြန်​ကြေညာ ထား​သည်။ အီး-စီး​က​ရက်​ကို ကမ္ဘာ​တစ်​ဝန်း လုံး​က ကြိုက်​လာ​သည်။ အထူး​သ ဖြင့် လူ​ငယ်​များ​က ပို​ကြိုက်​သည်။ အီး-စီး​က​ရက်​သည် ပူပူ​နွေး⁠နွေး​အ နံ့​မွှေး⁠မွှေး​အရည်​တစ်​မျိုး​ဖြစ်​သည်။ ယင်း​တွင်​လည်း နီ​ကို​တင်း​ဓာတ်​ပါ ဝင်​သည်​သာ​ဖြစ်​သည်။ အီး-စီး​က​ရက် မှာ ရေ​ငွေ့​ကို ရှူ​ရ​သော ဆေးလိပ် …
ဒီ​နာ(ပူ​စီ​နံ)ကို ဟိုး​နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ​ကတည်းက ဆေးဖော်​စပ်​ရာ​တွင်​လည်းကောင်း၊ ဟင်း​ချက်​ရာ​တွင်​လည်းကောင်း၊ လန်း​ဆန်း​စေ သည့် ဖျော်​ရည်​ပြုလုပ်​ရာ​တွင် လည်းကောင်း သုံးစွဲ​ခဲ့​ကြ​ပြီး အာ​ရှ​မှ ဥ​ရော​ပ​တစ်​လွှား​ထိ တွင်ကျယ်​စွာ အသုံးပြု​ကြ​ပါ တယ်။ ပူ​ဒီ​နာ​ရွက်​မှာ ဗီတာမင်​အေ၊ ဘီ ၆၊ စီ၊ အီး၊ ကေ စ​တဲ့ ဗီ​တာ မင်​တွေ​အပြင် ထုံး​ဓာတ်၊ သံ ဓာတ်၊ ပို​တက်​ဆီ​ယမ်၊ မဂ္ဂ​နီ​ဆီ ယမ်​နဲ့ မဂ္ဂ​နိစ်​စ​တဲ့ သတ္တု​ဓာတ် တွေ​လည်း ကြွယ်​ဝ​တာ​ကြောင့် ဆေး​ဖက်​ဝင်​တဲ့ ပူ​ဒီ​နာ​နဲ့​ပတ် သက်​ပြီး မ​သိ​မ​ဖြစ်​တဲ့ ကောင်း ကျိုး​တွေ​ကို မျှဝေ​ပေးလိုက်​ပါ တယ်။ ပူ​ဒီ​နာ​ရဲ့ အရေး​အပါ​ဆုံး ကောင်းကျိုး​တွေ​ထဲ​က တစ်​ခု​က တော့ အစာ​ခြေ​အဂ ၤါ​အဖွဲ့​အစည်း ကို …
မြန်မာ​မိသား​စု​ထဲ​မှာ သမီး​ငယ်​လေး တွေ ရာသီပန်း​စ​ပွင့်​ပြီ​ဆို​ရင် အမေ၊ အဘွား၊ အဒေါ်​တို့​က စိုးရိမ်​တ​ကြီး​နဲ့ သတိပေး​ပြော​ကြား​တာ​တွေ လုပ်​လေ့​ရှိ​ကြ​ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် အရှက်​အကြောက်​ကြီး​ပြီး ရှေး​ရိုး​ဆန်​တဲ့ အဘွား​တို့၊ အမေ​တို့​ဆို​ရင် သမီး ငယ်​ရဲ့ အပျိုဖော်​ဝင်​စ​အပြောင်း​အလဲ​ကို သမီး​ငယ်​တို့ နားလည်​လက်ခံ​အောင် ပြော​ပြတာ​ထက် သတင်းစကား​အမှား​တွေ​နဲ့ သမီး​ငယ်​တို့​ကြောက်လန့် သွား​အောင် ခြောက်လှန့်​တဲ့​နည်း​ကို သုံး​ကြ​ပါ တယ်။ ကျွန်မ​ကိုယ်တိုင်​လည်း ဒီ​အပြောင်း​အလဲ​ကို စ​ကြုံ​ရ​ချိန်​မှာ အဘွား​ဖြစ်​သူ​က ယောက်ျား​လေး​တွေ​အသား​နဲ့​သွား​မ​ထိ​ရ​ဘူး။ ဗိုက်​ကြီး​ပူ​တတ်​တယ်။ ယောက်ျား​လေး​တွေ​နဲ့​အတူတူ မက​စား​ရ​တော့​ဘူး။ အဖေ​နဲ့​လည်း​အတူတူ မ​အိပ်​ရ တော့​ဘူး​လို့ သတိပေး​ပြော​ကြား ခြင်း​ခံ​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ်။ မနေ့​တစ်​နေ့​က​အထိ လွတ် လပ်ပျော်​ရွှင်​စွာ ဆော့​က​စားပျော် မြူး​နေ​တဲ့ ကလေး​ဘဝ​က​နေ ချက် ချင်း​ကြီး​အပြောင်း​အလဲ​တစ်​ခု​ကို လက်ခံ​ဖို့ …
မျက်နှာ အဆီ​ပြန်​တတ်​သူ​တွေ နဲ့ ပေါင်း​စပ်​အသားအရေ (ခေါ်) နဖူး​အလယ် နှာခေါင်း၊ မေးစေ့ တွေ​မှာ အဆီ​ပြန်​တတ်​သူ​တွေ​ဟာ အမည်း​စက်​တွေ ထွက်​လေ့​ရှိ​ပါ တယ်။ အမည်း​စက်​လို့ ဆို​ပေ​မယ့် တကယ်​တမ်း​မှာ​တော့ ဝက်ခြံ​ဖြစ် ပြီး ၎င်း​ကို​ညှစ်​လိုက်​တဲ့​အခါ​အထဲ က အဖြူ​ရောင်​အဆန်​လေး​တွေ ထွက်​လာ​တာ​မျိုး​ပါ။ ထို​အမည်း စက်​တွေ​ကို နှာခေါင်း​ထိပ်​တစ် ဝိုက်​မှာ အများ​ဆုံး​တွေ့​ရ​ပြီး နှာ ခေါင်း​ဘေး​ကပ်​လျက်​ရှိ​သော ပါး ပေါ်​မှာ​လဲ​တွေ့​ရတတ်​ပါ​တယ်။ အောက်​နှုတ်ခမ်း​နဲ့ နီး​ကပ်​နေ​သော မေး​စေ့ပေါ်​မှာ​တော့​ကြာ​စူး​ကဲ့သို့ အဖု​ချွန်း⁠ချွန်း​လေး​တွေ ခပ်​ကျဲ​ကျဲ ထွက်​ပြီး​၎င်း​ကို​ကုတ်ခြစ်​ကြည့်​တဲ့ အခါ​မှာ​လဲ အဖြူ​ရောင်​အဆန် ထွက်​ရှိ​လာ​ပါ​တယ်။ ပျမ်းမျှ​အား​ဖြင့် အမျိုးသား​တွေ ထက်​အမျိုးသမီး​တွေ​မှာ​ပို​၍​အဖြစ် များ​ပြီး ဆယ်ကျော်​သက်​အရွယ်​က စ​လို့ ခု​လို​မျိုး​ထွက်​လာ​ကြ​တာ​ပါ။ သာမန်​ဝက်ခြံ​ဖု​တွေ​ဟာ အချိန်​တန် လို့ …
နှစ်​ပေါင်း​ကတော့ နည်း⁠နည်း​ကြာ​သွား​ပြီ လူ​တစ်​ယောက်​က​ကင်​ဆာ​ဖြစ်​နေ​တဲ့ သူ့​သူငယ်ချင်း​တစ်​ယောက် အတွက်​က​ညွှတ်​ပင်​လိုက်​ရှာ​နေ​တာ ကျွန်တော်​တွေ့​ခဲ့​ဘူး​တယ်။ပြီး​တော့ ၁​၉​၇​၉ ခု​နှစ် ဒီ​ဇင်​လ​ဘာ​ထုတ်​ကင်​ဆာ​ဂျာနယ်​က​နေ မိတ္တူ​ကူး​ထား​တဲ့​စာ​ရွက်​တစ်​ရွက် ကျွန်တော့်​ကို ပေး​ခဲ့​တယ်။ စာရွက်ကအကြောင်းအရာကတော့Asparagus for cancer (ကင်​ဆာ​အတွက် က​ညွှတ်​များ)ဆို​တဲ့ အကြောင်း​ဘဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဝေမျှခြင်းသက်သက်သာဖြစ်​ပါ​တယ်။ကျွန်တော်ဟာ ဇီဝ​ဓါတု ပညာ​ရှင်​တစ်​ယောက်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ Richard R.Vensal, D.D.S ရဲ့​ရှာဖွေ​ချက်​တွေ​က​နေ က​ညွှတ်​က​နေ ကင်​ဆာ​ရောဂါ​ကု​သ​နည်း​ကို သင်​ယူခဲ့​တာ နှစ်​အတော်​ကြာ​ခဲ့​ပါ​ပြီ​သူ​ရဲ့​ပ​ရော​ဂျက် လုပ်​ငန်း​တွေ​ထဲ​မှာ​လဲ သူ​နှင့်​အတူတကွ လုပ်ကိုင်​ခဲ့​သ​လို ကျွန်တော့မှာ စုဆောင်း​ထား​တဲ့ က​ညွှတ်​က​နေ ကင်​ဆာ​ရောဂါ​ကု​သ​ပျောက်ကင်း​သွား​တဲ့ အထောက်​အထား အချက်အလက်​တွေတော်တော်​များ⁠များ​ရှိ​ခဲ့​ပါ​တယ် အဲ့​ဒါ​တွေ​ကတော့ ….. ၁/- လူ​တစ်​ယောက်​ဟာ သွေး​ကင်​ဆာ​ဖြစ်​တာ မျှော်လင့်​ချက်​မဲ့​လု​နီးပါး​ဖြစ်​နေ​ပါ​ပြီး ဗုံး⁠ဗုံး​လဲ နေ​ပြီ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကညွှတ်ကထုံးနဲ့ တစ်​နှစ်​ကု​သ​အပြီး​မှာ​တော့​ဆရာဝန် …
ရင်​ထဲ​မှာ နေ​လို့​မ​ကောင်း​ဘူး အောင့်⁠အောင့်​နေ​လို့​ပါ​ဆို​ပြီး ဆရာဝန်​ဆီ​ကို လာ​ရ​တဲ့​လူ​တွေ မ​နည်း​ပါ​ဘူး။ ဒီ​လို ရင်ဘတ်​အောင့်​တာ​လာ​ပြ​ကြ​သူ​တွေ​ထဲ​မှာ ၄ ပုံ ၃ ပုံ​လောက်​ကတော့ ကျွန်တော်​မှာ နှလုံး ရောဂါ ဖြစ်​နေ​ပြီ​လား မ​သိ​ဘူး​လို့​လည်း ပြော​ကြ​တာ ကြား​ရ​မှာ​ပါ။ ဒါ​ကြောင့် ရင်ဘတ်​အောင့်​တယ်​ဆို​တဲ့ ပြသ​နာ​ဟာ မိမိ​ကိုယ်တိုင် ပြင်း​ပြင်းထန်​ထန် မ​ဖြစ်​ဖူး​ဘူး​ဆို​ရင်တောင် အနည်းအကျဉ်း တစ်​ခါ နှစ်​ခါ​တော့ ကြုံ​ဖူး​ကြ​မဲ့ ပြသ​နာ​ပါ။ တစ်​ချို့​လည်း ပြန်​ကောင်း​သွား​လို့၊ တစ်​ချို့​ကတော့ မ​သက်သာ​လို့ ဆရာဝန်​ဆီ​ရောက်လာ​ရ​တာ​ပါ​ပဲ။ ဒီ​တော့ ရင်ဘတ်​အောင့်​တတ်​သူ​များ ရင်ဘတ်​အောင့်​ရ​ခြင်း အကြောင်း​လေး​များ​ကို ဘု​မ​သိ ဘ​မ​သိ မ​ဖြစ်​ရ​လေ​အောင် ဒီ​ဆောင်းပါး​လေး​နဲ့ အကျဉ်း​ချုံး ရှင်း​ပြ​လိုက်​ပါ​တယ်။ ရင်ဘတ်​အောင့်​ရ​ခြင်း လက္ခဏာ​ဟာ တစ်​ချို့​အတွက်​တော့ ဘာ​မှ မ​ဖြစ်​ပဲ …
သူငယ်ချင်း​တို့​ရေ…ဆေးလိပ်​တ​လိပ်​သောက်​ရင် အသက်​၁​၄​မိ​နစ် တို​တယ်.ဘဝ​မှာ​တချို့​က​ဆေးလိပ်​သောက်​ခဲ့​မိ​ပါ​လိမ့်​မယ်….ဒါ​ဆို.ဆေးလိပ်​ဘယ်​လို​ဖြတ်​မ​လဲ..?? ယနေ့​လူ​ငယ်​တွေ​အတွက် အဓိက​ဖြတ်​ရ​မဲ့​အရာ​ပါ။ဆေးလိပ်​နဲ့​ကျန်းမာ​ရေး​ကြိုက်​ရာ​ရွှေး​ဆို​တာ​ကို​သိ​နေ​ပေ​မဲ့…မ​ဖြတ်​နိုင်​သေး​ပါ​ဘူး…. သူငယ်ချင်း​တို့​အချင်းချင်း​ဖြတ်​နိုင်​အောင်​ကူညီ​ပေး​ကြ​ပါ။ ။။မိတ်ဆွေ​တို့​ထဲ​မှာ​လည်း​ဆေးလိပ်​သောက်​သူ​တွေ​ပါ⁠ပါ​လိမ့်​မယ်..ဒီ​နေ့​က​စ​ဖြတ်​ကြ​ပါ​စို့​ဗျာ….. ဆေးလိပ်​သောက်​ရင်​တော့…..ဒီ​ရောဂါ​တွေ​ရ​နိုင်​ပါ​တယ်…. Psoriasis ခေါ်​တဲ့ အရေ​ပြား​ရောဂါ ။ Cataracts ခေါ်​တဲ့ မျက်စိ တိမ်​စွဲ​ရောဂါ Wrinkling ခေါ်​တဲ့ အသားအရေ ရှုံ့တွ အိုမင်း​ခြင်း ။ (ဒါ​ကြောင့်​ဆေးလိပ်​သောက်​သူ​တွေ ရုပ်​ရည်​ဟာ မ​သောက်​သူ နဲ့​ယှဉ်​လိုက်​ရင် ပို​ပြီး အိုစာ​နာ​ကျ ပုံ ဖြစ်​နေ​ရ​တာ​ပါ ။) Hearing Loss ခေါ်​တဲ့ နား အကြား​အာရုံ ချို့တဲ့​ခြင်း​ရောဂါ ။ Cancer ခေါ်​တဲ့ ကင်​ဆာ အမျိုး​မျိုး – ဥပမာ အဆုပ်။နှာခေါင်း​လည်ချောင်း ၊လေပြွန်၊အသံ​အိုး ၊ခံတွင်း​ကင်​ဆာ၊အစာ​မြို​ပြွန် ၊ အူ၊ ရင်သား …